कोरोनाको आँकडा लुकाएको विश्वव्यापी आरोपपछि बोल्यो चीन, सत्य के हो? – Everest Pati
काठमाडौं ।अंग्रेजी वर्षको डिसेम्बर महिनाको अन्तिम साता चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको भनिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्व भयभित छ । भाइरसको उद्गमस्थल वुहान र सिंगो देश क्रमिक रुपमा तङ्ग्रीँदै छ । तर एकातिर चीनले लिएको लकडाउनको नीति र कडाईका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको भन्दै धेरैले प्रशंसा गरेका छन् भने अर्कोतिर संसारलाई नै आश्चर्यमा पार्ने संक्रमित र मृतकको तथ्यांक भने झुटो अर्थात् ‘फेक’ भएको भन्नेहरु पनि छन् ।
चीनमा कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ सँग जोडिएका ईस्यु र मृतकको जानकारीको यकिन डाटा छिपाएको विषयलाई लिएर लगातार एक पछि अर्काे आरोप लाग्दै आएको चीनसँग अमेरिकी राष्टपतिले बेलाबेलामा आगो ओकल्छन् ।
कतिपय चिनियाँ साईटले विभिन्न रिपोर्टहरु सार्वजनिक गर्दै चीनले फेक तथ्यांकको सहारा लिएर विश्वमा आफूलाई शक्तिशाली देखाउने ढोंग रचेको सम्म भनेका छन् । केहि समय अगाडी चीनको विच्याटमा विभिन्न भिडियो क्लिप्सहरु बाहिरीएको थियो । त्यसले पनि मानिसहरुको आशंकामा निकै बल पुग्यो।
सोसल मिडियामा चीनमा कोरोना भाइरसबाट २ करोड भन्दा धेरै जनाको मृत्यु भएको दाबीसहितको पोष्ट र त्यसमा संशय पैदा गर्ने एउटा तथ्यका कारण पनि यो शंका अझै फराकिलो भएको थियो । त्यो हो, मोवाईल युजर्सको संख्यामा भारी गिरावट आउनु । त्यतिबेलै केहि चिनियाँ नागरिकले भिडियो र दस्तावेजको माध्यमबाट कोरोनाले चीनमा मृतकको सरकारी आँकडामा सवाल खडा गरेका थिए ।
उनीहरुले चीनमा तीन महिनामा २।१ करोड मोवाइल फोन प्रयोगकर्ताहरु कम भएको दाबी गरेका थिए ।केहि चिनियाँ नागरिकले भिडियो र दस्तावेजको माध्यमबाट कोरोनाले चीनमा मृतकको सरकारी आँकडामा सवाल खडा गरेका छन् । उनीहरुले चीनमा तीन महिनामा २।१ करोड मोवाइल फोन प्रयोगकर्ताहरु कम भएको दाबी गरिएको छ । (यससँग सम्बन्धित पूरा जानकारीका लागि यो लिंक खोल्नुहोस् )के चीनले मृतकको आँकडा लुकाएकै हो त ?
हो कि होईन त ? भन्ने अन्यौलता र प्रश्नलाई चिर्न चीनले नयाँ जानकारी दिएको छ ।चीनले भन्यो, चीनमा अहिलेसम्म १५४१ वटा त्यस्ता केस छन्, जसमा कुनै पनि कोरोनाको संक्रमणका लक्षण देखिएका छैनन् । चीनमा अहिलेसम्म बिना लक्षणका डाटा अर्थात् तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको बताएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनको वेबसाइटका अनुसार चीनमा बिना कुनै लक्षणका १५४१ केश रहेका छन् । जसमा अर्काे देशबाट आएका मानिसहरुको संख्या २०५ रहेको छ । तर बयानमा भने चीनले ‘रिकभर’ भएका संक्रमितहरको काउन्ट गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा खुलाइएको छैन ।
चीनमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस ८१ हजार ६ सय २० जनामा संक्रमण रहेको छ भने महामारीका कारण ३ हजार ३ सय २२ जनाको ज्यान गएको छ । आजमात्रै चीनमा थप ४ जनाको ज्यान गएको हो । त्यस्तै चीनमा आज ३१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
चीनको आँकडा माथि यसकारण पनि सवालहरु उठ्दै आएका छन् कि,चीनले लक्षणविना नै संक्रमण भएका मानिसहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको रुपमा गणना गर्दैन ।
यदि कसैको ‘टेस्ट पोजेटिभ’ आएको छ तर उसमा कुनै लक्षण देखिएन तर संक्रमण छ भने चीनले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सूचीमा राख्दैन । तर द. कोरिया, जापान र सिंगापुर जस्ता देशहरुमा टेस्टमा पोजेटिभ पाइएपछि संक्रमितलाई आधिकारिक आँकडामा सामेल गराउँदछ ।
यो आँकडा चीनको प्रिमियर ली केकियांगका स्थानीय अधिकारीलाई बिना लक्षणका मामिलाहरु टर्याक गर्ने र स्क्रिनिङ बढाउने निर्देशन दिएको एकदिन पछि जारी गरिएको थियो ।
चीनका अनुसार चीन बिना लक्षण वाला कोरोना भाइरसका मामिलालाई टर्याक गर्दछ । जब उनीहरुमा लक्षण देखाउन शुरु गर्दछ, तबमात्रै चीनले उनीहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमितको रुपमा राख्ने गर्दछ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार यस्तो प्रकारका संक्रमितहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउने पाइएको बताएको छ । त्यसैले चीनले गैर लक्षणवाला केसहरु काउन्ट नगरेको भएर संसारभरमा चीनले कोरोना संक्रमित र मृतकको आँकडा लुकाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उक्त तथ्य बाहिर आएपछि भने अधिकांश वैज्ञानिकहरुले वुहानमा कोरोना नष्ट भएको नहुन सक्ने बताईरहेका छन् । केहि बिश्लेषकहरुले त चीनमा कोरोनाको महामारी नसकिएको र झनै साइलेन्टरुपमा फैलिरहेको बताएका छन् ।चीनले दुई हप्ता अगाडि कोरोनाका नयाँ केस चीनमा नभएको दाबी गरेको थियो तर आजसम्म पनि कोरोनाका संक्रमितहरु बढी नै रहेका छन् ।
चीनको एक म्यागेजिन क्याक्सिनले आफ्नो रिपोर्टमा चीनमा अझै पनि बिना लक्षणवाला केस आईरहेको बताएको थियो ।मार्च महिनामा मात्र चाइना मर्निङ पोस्टमा छापिएको एक रिपोर्टका अनुसार, चीनमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ पाइएको एक तिहाई मानिसहरुमा ढिला लक्षण देखापरेको र कसैलाई लक्षण नै नदेखाएको बताएको थियो ।
बिना लक्षणवाला संक्रमणका केसको बारेमा टेस्टिङ बाटै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर केहि देशहरमा भने टेस्ट लक्षण देखा परेपछि मात्र गर्ने गरिएको छ ।त्यसैले देशमा कति संक्रमित छन् भन्ने कुरा सबैको परिक्षण नगरि यकिन गर्न मुश्किल हुने गर्दछ ।
कोरोनाको कारण यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वभर १० लाख ४० हजार ६३९ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने ५५ हजार १ सय ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ बाट संक्रमित भएर उपचारपछि २ लाख २२ हजार २ सय ४० जना निको भएका छन् त्यस्तै विश्वभर अहिलेसम्म सक्रिय केस ७ लाख ६३ हजार २ सय एघार जना रहेको छ । त्यस्तै गम्भिर संक्रमितको संख्या ३८ हजार ४ सय १५ रहेको छ ।
भाइरसका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनेको छ, ईटली । यहाँ १३ हजार ९ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । आज भने ईटलीमा भाइरसको संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको अभिलेख छैन । संक्रमित संख्या भने १ लाख १५ हजार २ सय ४२ पुगेको छ । त्यस्तै महामारीबाट अत्याधिक प्रताडित देशहरुको दोस्रो नम्बरमा रहेको स्पेनमा १ लाख १७ हजार ७ सय १० जनामा संक्रमण देखा परेको छ । १० हजार ९ सय ३५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
आजमात्रै स्पेनमा पाँच सय ८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पाँच हजार ६ सय ४५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । त्यस्तै ६ हजार ४ सय १६ जना कोरोना संक्रमितको अवस्था गम्भिर बनेको छ । उता प्रभावित देशको तेस्रो नम्बरमा रहेको अमेरिकामा २ लाख ४५ हजार ४ सय ४२ जना संक्रमित रहेका छन् भने आजमात्रै ५ सय ६५ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् ।
६ हजार ९८ जनाले अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका छन् भने पाँच हजार ४ सय २१ संक्रमितको अवस्था गम्भिर रहेको छ । आजमात्रै २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै चौँथो प्रभावित देशको सूचीमा फ्रान्स रहेको छ । त्यहाँ अहिलेसम्म ५ हजार ३ सय ८७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५९ हजार १०५ जानमा संक्रमण देखिएको छ ।
यताचीनमा अहिलेसम्म ३ हजार ३ सय २२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८१ हजार ६ सय २० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । र आजमात्रै ३१ वटा नयाँ केस फेला परेका छन् भने थप ४ जनाले भाइरसका कारण आज ज्यान गुमाएका छन् ।
चीनमा कोरोनाविरुद्धको खोप सफल परिक्षण